I-Little Green Cottage ngaseLwandle - I-Airbnb
I-Little Green Cottage ngaseLwandle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSue
Indlu yakho izimele ngokupheleleyo kwibhloko engaphambili elunxwemeni eDundowran Beach. Isilwanyana esinobuhlobo nekhitshi langoku, igumbi lokuhlambela / indawo yokuhlamba impahla, indawo yokuhlala ephangaleleyo kunye neveranda. Umbono wakho ngowomyezo we-cottage ongaphambili kwipropathi yethu. Ibhloko yethu yihektare enesiqingatha esinomgama olungileyo phakathi kwendlu yethu kunye nendlu yangasese. Imizuzu eyi-10 ukuya eHervey Bay.
Lo mfanekiso ukwindawo yokuhlala elunxwemeni lwethu. Ulwandle lunamaza ngoko ke sinezinto zokuqubha ezimnandi njl. Asifane sibandezeleke zii-midges ezilumayo ukuze ukuhambahamba elwandle ngorhatya kube mnandi kakhulu. Imimoya yasehlotyeni isuka kuMantla ngaphaya kolwandle nto leyo eyenza ukuba impahla yethu iphole nangezona ntsuku zishushu. Ulwandle lwethu lujonge ngaseMantla kwaye lukhuselwe luhlaza lwangaphambili olusuka kwimimoya yaseMazantsi eMpuma.
Ulwandle lwethu lulungele inja kunye ne-24/7 off leash beach 50m ecaleni kolwandle lwethu ukuya eMpuma. Ngaphambi kwepropathi yethu ixesha livaliwe. Ke iintsasa kunye nangokuhlwa zivaliwe kodwa ngexesha lasemini izinja kufuneka zibotshwe.
Simalunga ne-8km ukusuka kumbindi weHervey Bay. IiGadi zeTea zaseArkarra zikufutshane kwindawo yokutyela nokuhamba. Unokufumana uninzi lwezilwanyana zasendle ngelixa uhamba ujikeleze ichibi lamanzi amatsha apha. Ihlathi laseMungomery Vine kukuhamba nje okufutshane.
Ukuba uyonwabela ulwandle kunye nendalo ngokwenene siyindawo apho ihlathi lidibana nolwandle.
Ngexesha leNtwasahlobo phakathi kukaOkthobha ukuya kuDisemba sihlala sidibana ne-algae eluhlaza. I-algae ayiyongxaki kuthi njengoko unokuhamba ngayo ukuya emanzini ukuze uqubhe. Asinakuxela kwangaphambili ukuba iza kufika nini kwaye ihambe nini kodwa siyathanda ukwazisa iindwendwe zethu kwangaphambili. Ibisoloko inyamalala ngaphambi kweKrisimesi.
iisofa eziyi-2, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
4.91 out of 5 stars from 449 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-449
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi449
Indawo yethu iluphuhliso lweeacreage kwaye igcine indawo yokuhlala yendalo emangalisayo. Yindawo enoxolo eyahlukileyo kodwa ikufutshane nesixeko sethu esihle saseHervey Bay. Ukuba nolwandle ngokuthe ngqo ngasemva kwepropathi yethu kwenza ukuhlala apha kukhetheke ngakumbi. IiOsprey kunye neeLorrikeets njl.njl zihleli kwimithi ekufutshane nathi kwaye sine wallabies, iikhangaru kunye nezinye izilwanyana zasendle kumnyango wethu ongasemva. Ulonwabo.
Dundowran Beach is my happy place and it’s lovely to be able to share it with our guests. I enjoy gardening, reading and the company of my pets.
Nceda usazise phambi kokuba uhambe ukuba ufumana naziphi na iingxaki.
Sijonge ukudibana nawe kwaye siya kubonelela ngoncedo xa lufuneka ukwenza utyelelo lwakho lube lolonwabele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dundowran Beach